चुनावबाट आएको पार्टीले अधिनायकवाद ल्याउँदैन : घनश्याम भुसाल -::DainikPatra
घनश्याम भुसाल, विचा र र दर्शनको बहस चलाउने अभियन्ता हुन् । एमाले उपमहासचिव भुसाल पार्टीभित्र वैचा िरक बहस चलाउने नेताका रूपमा चिनिन्छन् । भुसाल रूपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका उम्मेदवा र हुन् । उनी विभिन्न विकासका एजेन्डा र राजनीतिको आगामी बाटोका विषयहरू लिए र मतदातामाझ पुगेका छन् । भुसालले बिहानैदेखि थालेका छलफल, भेटघाट, घरदैलो, सभाहरू सकेर घर फर्किंदा रात प िरसक्छ । प्रस्तुत छ, यही व्यस्त समयका बीच भुसालसँग वर्तमान राजनीतिक घटनाहरू, आगामी मार्ग र चुनावपछिको मुलुकको अवस्थालगायतका विषयमा गरेको कुराकानीको अंश ः
देश निर्वाचनमय छ, निर्वाचनपछि मुलुकको राजनीतिले कुन मोड लिन्छ ?
सबैभन्दा पहिला त हाम्रो गठबन्धनको कुरा छ । हामीले कति गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हो । सम्भावनाको हिसाबमा कु रा गर्दा नेपालमा स्थि र स रका रको सम्भावना रहेको छ । जुन मुलुकको माग हो । त्यसको सबभन्दा पहिलो प्रभाव हाम्रो वैदेशिक सम्बन्धमा पर्न जान्छ । खासग री भा रतसँगको सम्बन्ध सन्तुलित बनाउनका लागि समानतामा आधारत हुनका लागि सहयोग गर्ने छ । विवाद समाधानका लागि विवाद रत पक्षहरू दुवै बलिया हुनु पर्दछ । योभन्दा अगाडि हामी कमजो र थियौँ । अहिले अचानक बलियो भयौँ भन्ने त होइन, त र नेपालले कहिले पनि हा रेन । त र विभिन्न राजनीतिक का रणले स्थि रताका साथ हिंड्न पाइ रहेको थिएन । वाम गठबन्धनको स रका र बन्दा त्यो एउटा स्थायित्वसहितको बलियो स रका र हुने छ । भा रतसँग राम्रो सम्बन्ध हुनेछ । यस हिसाबले यो एउटा ऐतिहासिक पनि हुनेछ । चीनसँग राम्रो सम्बन्ध छँदै छ । भा रतसँग पनि राम्रो सम्बन्ध बनाउने हो । भा रतका केही सु रक्षा चासोहरू छन् र त्यसलाई बलियो स रका रले सम्बोधन गर्न सक्दछ । त्यो भनेको हतिया र ओसा रपसा रको कुरा होला, आवतजावत, जाली नोटलगायतका कु राहरू रहन सक्छन् । यो कु रालाई त म जायज नै मान्छु । यो सु रक्षा चासो जायज छ । यसलाई हामीले छिमेकीको नाताले सम्बोधन गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि हामीकहाँ एउटा बलियो स रका र चाहिन्छ । त्योभन्दा अगाडि नै हामीहरूले सहयोग ग रेको भए राम्रै हुन्थ्यो । उनीहरूले ग रेनन् अब हामी गर्दैछौँ । स्थिरसरकार र भारतसँगै विश्वका सबै मुलुकसँग राम्रो सम्बन्ध हुँदा हामी समृद्धिका लागि राष्ट्रिय एकताका साथ अघि बढ्न सक्छौं । यस अर्थमा हामी एउटा नयाँ इतिहास कोर्ने संघा रमा छोैँ । त्यो सम्भावनाको नजिक छौँ । यो निर्वाचनपछि बाम गठबन्धनको स रका र बन्छ भन्ने यसै निश्चित छ ।
यसअघि पनि त विभिन्न दलहरूबीच गठबन्धन स रका र बने, बहुमतीय स रका रहरूले पनि खासै त्यस्तो प िरवर्तन ल्याउन सकेनन् । राजसंस्थाले विकास गर्न दिएन भनियो, ०६२÷०६३ को आन्दोलनपछि दलहरू नै सत्तामा शक्तिसहित पुगे, बहुमतीय स रका र हुँदैमा प िरवर्तन होला त ?
यो खालको आशंका ठीक हो । लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा राष्ट्र स्थि र हुँदैन भन्ने एउटा आशंका रहेको छ । यो आशंका बलियो सरकार दिएर हटाउने तया रीमा हामी रहेका छौँ । राजतन्त्र गएपछि देश स्थि र हुँदैन भन्ने भ्रमलाई पनि हामी चिर्दैछौँ । यसर्थ हामी नयाँ इतिहास कोर्ने छौँ । राजतन्त्र आफैँ पनि अस्थि रताबाट नै सुरु हुँदै गएको थियो । अब हामीले अन्ततः जित्ने अवस्था आएको छ । हामी एउटा नयाँ मोडमा आए र उभिएका छौं । यसपछि बन्ने वामहरूको स रका र पाँच वर्ष टिक्छ र यसले समृद्धिको मार्गमा मुलुकलाई लैजान्छ । यसमा अब शंका गर्नुपर्दैन ।
दलहरूले त यसो भन्न थालेको धे रै वर्ष भइसक्यो, चुनावको समयमा त झन् अनेकौं सपनाहरू बाँडिएका छन्, आज सबै गर्छौं भन्ने त र भोलि अनेक बहाना ग रे र सकिएन भन्ने त हैन ?
इतिहासलाई हेर्दा सात सालको आन्दोलनमा हाम्रो सहभागिता नै शून्य ब राब र थियो । त्यो समयमा हामीले वक्तव्य मात्र जा री ग¥यौँ । १५ सालमा संसद्मा उपस्थिति रह्यो । ०३६ सालमा हामी आन्दोलनमा धे रै अगाडि आइसकेका थियौँ । ०४६ सालको आन्दोलन त संयुक्त नै भयो । ०६२÷०६३ सम्म एजेण्डालगायतका कु राले गर्दा हामी अगाडि आयौँ । योे क्रम हेर्दा हामी नि रन्त र अगाडि बढि रहेका छौं । यो बढेको शक्तिले अब स्थि र स रका र दिन तया र भयो भन्नु एउटा प्रमाण हो ।
तपाइँले राष्ट्र निर्माणको क्रममा पार्टी गुटका सुकेधन्दाहरू अवरोधको रूपमा आए भन्नुभएको छ, फे िर पनि त्यस्तै पार्टी गुटका सुकेधन्दाको सिका र हुने त हैन समृद्धिको सपना ?
अहिले गुटहरू गुटमा मात्र सीमित छैनन् । पार्टीभित्र गुट, गुटभित्र उपगुट रहेका थिए । हिजो मान्छे पार्टीमा थियो, त्यसपछि गुटमा र उपगुटमा पुग्यो । आजभोलि मान्छेहरू स्वतन्त्र रहेका छन् र यस अर्थ गुटहरूको भविष्य अब छैन । नेपाल बनाउने संगठनले गुटहरूको सत्यनाश गर्नेछ र हामी एउटा विचा रमा आधा िरत पार्टीमा समावेश हुनेछौं । र, विचा रकै का रणले पार्टीप्रति सहमति र असहमति हटाउने छ ।
तपाइँले चुनावपछि वाम गठबन्धनको स रका र बन्छ भन्नुभयो, यो सरकार कुन शैलीको सरकार हुनेछ ?
यो लोकतान्त्रिक हुनेछ । सामाजिक न्यायका साथ समृद्धिको बाटोमा जानेछ र समाजवादतर्फ जानेछ । लोकतान्त्रिक तव रबाट नै समाजवाद ल्याउने खालको हुने छ ।
अब नेपालमा साम्यवाद आउने भयो, कम्युनको अभ्यास ग िरँदैछ, यो गठबन्धनले अधिनायकवाद ल्याउँदैछ भन्ने चर्चाहरू सुनिन्छन् नि !
यो चाहिँ कम्युनिष्टहरू आए भने बुढाबुढीलाई गोली हान्छन् भन्ने जस्तो हो । चुनावबाट आएका पार्टीले कहीँ पनि अधिनायकवाद लाद्ने प्रयास ग रेनन् । यो नै त्यसको प्रमाण हो । एक त हामी आफैँ लोकतन्त्र ल्याएका पार्टी हौं । हामीले आफै लडे र ल्याएको हो लोकतन्त्र । अब भन्नुस्, त्यस री लडे र ल्याएको लोकतन्त्र, आफ्नै सन्तान मार्न सकिन्छ ? त्यस्तो कु रा हुँदैन ।
चुनावमा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन छ । चुनावपछि पार्टी एकता गर्ने भनिएको छ । एकतापछि बन्ने पार्टीले कुन सिद्धान्त बोक्छ, कुन वादमा आधा िरत हुन्छ ?
माओवादी केन्द्रले माओवादको प्रयोग ग¥यो । हामीले समाजवादको अभ्यास ग¥यौं । जनताको बहुदलीय जनवादका लागि प्रयास भयो । अब हामी माक्र्सवादी समाजवादी भए र अगाडि जान्छौँ ।
तपाईं माक्र्सकै कुरा बोक्ने, समाजवादकै कु रा बोक्ने भन्नुहुन्छ, यी वादहरू बोके र मुलुकमा प िरवर्तन हुँदैन भने र केही शक्तिहरू लागि रहेका छन् नि !
शक्ति नै नभएको ठाउँमा पो नयाँ शक्ति आउनु अर्को कु रा हो । यहाँ यति धे रै शक्ति छन् । थप शक्ति बन्न आउने कु रा सफल होला जस्तो लाग्दैन । यहाँ सबै शक्तिहरू असफल भएको प्रमाणित भएको भए अर्को शक्ति आउन सम्भव थियो । पु राना शक्ति बहुसंख्यक हुँदा बाह्य समूहको भविष्य देखिँदैन । नयाँ त नाम मात्रै हो ।
अब तपाइँको चुनावी अभियानको कुरा गरौं, कस्तो चल्दैछ रूपन्देही ३ मा चुनावी अभियान ?
ठीकै छ, अहिलेसम्म सामान्यै छ । यति दिनको प्रयासपछि ट्रयाकमा आइपुगेका छौं । विजय सुनिश्चित छ । त्यो विजयलाई अझै प्रभावका री बनाउन लागेका छौँ । गठबन्धनले धे रै सहज भएको छ । अर्को सजिलो, कांग्रेस मैदानमा छैन, यसैले सहजै जित्ने अपेक्षा छ । कांग्रेसका साथीहरूले पनि मलाई साथ दिनुभएको छ । सबैको साथ र सहयोग छ ।
तपाइँलाई धेरैजसो बहसमा, सिद्धान्तमा, दर्शनमा घोत्लि रहने, त्यसैमा रमाउने त र जनतामाझ कम जाने र चुनावी रणनीति बनाउनतर्फ त्यति चासो नदिने भन्ने आ रोप छ नि !
त्यो आ रोप मात्रै हो । चुनाव भनेको झुठो बोल्ने, च िरत्र हत्या गर्ने, राज्य लुटेका पैसाले कार्यकर्ता पाल्ने, साम्प्रदायिक कु रा फैलाउने लगायतलाई समाजले चुनावी क्षमता भन्छ होला । त्यस अर्थमा म कमजो र छु, म त्यस्तो केही पनि जान्दिन । त र सामाजिक मूल्यको, समाजको, विकासको, समृद्धिको, जनताको जीवनको कु रा मैले ग रेको छु । मे रा एजेण्डा नै यिनै हुन् । म झुक्याउन, सक्ने–नसक्ने कु रा भन्दै हिँड्न म सक्दिन । मे रो यो कमजो री नै हो ।
समाजले बुझ्छ त यो कुरा ?
समाज सचेत भइसक्यो । समाजलाई केही कु रा बुझाउनु पनि थियो । मैले बुझाउने प्रयास पनि ग रेको छु । अघिल्लो चुनावमा ४६ मतले हा रेँ, मे रो जति मत आयो, के त्यो मत जनमत होइन त । त्यसैले म बनावटी कु रा नग री वास्तविकतामा आधा िरत कु रा ग िर रहेको छु, यो कु रा समाजले बुझ्छ ।
तपाइँका एजेण्डा के हुन् ?
खासग री मुलुकलाई समृद्ध बनाउने नै मूल कु रा हो । हामीले राजनीतिक प िरवर्तनहरू धे रै ग¥यौं । अब मुलुकको समृद्धिका लागि गर्नुपर्ने बेला आएको छ । यसलाई केन्द्रविन्दुमा राखे र मे रो अभियान जा री छ । रूपन्देही क्षेत्र नं. ३ बाट उम्मेदवा र भएका हिसाबले केही विकासका योजनाहरू पनि ल्याएको छु । वाम गठबन्धनको स रका र बनेपछि ती योजनाहरू पू रा हुनेछन् । यो क्षेत्रको विकासका हिसाबले हेर्ने हो भने लुम्बिनीलाई केन्द्रमा राखे र विकास हुनेछ । लुम्बिनीमा मूर्ति राखे र मात्र हुँदैन । त्यहाँ आउने पर्यटकहरूलाई व्यवस्थित बनाउनु आवश्यक छ । होटल, विमानस्थल लगायतका कु राहरू हुन्छन् । अन्त र्राष्ट्रिय स्त रका कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन्छन् । जसले आन्त िरक आम्दानीमा पनि वृद्धि गर्नुपर्ने छ । क्रिकेटका लागि प्रोत्साहनलगायतका कु राहरू आवश्यक छ र सकिन्छ पनि । ५–१० वर्ष भित्रमा लुम्बिनी क्षेत्र नमुना बनाउँछौँ । रूपन्देहीलाई विकासको केन्द्र बनाउनुछ । गौतमबुद्ध अन्त र राष्ट्रिय विमानस्थल प िरयोजना, बेथ री–बेलवास नह रसहितको ह िरत सडक आयोजना, को रला नाकादेखि सुनौली सडक एवं कालीगण्डकी क िरडो र आयोजना, हुलाकी राजमार्गलाई चा र लेन बनाउने, सिद्धार्थनग रमा निर्माणाधीन क्रिकेट स्टेडियम, केरुङ–पोख रा–लुम्बिनी रेलमार्गजस्ता आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखे र सम्पन्न गर्ने काम पनि हामीले गर्नेछौं ।